पृथ्वीमा बढ्दो जनसङ्ख्या र नेपाल
मुलुकका दुई छिमेकी देशहरू संसारमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका देशहरू हुन् । यी दुई देशमा मात्र अढाइ अर्बभन्दा बढी मानिसहरू बसोबास गर्छन् । छिमेकी देशहरूको तुलनामा नेपालको जनसंख्या निकै नै थोरै देखिन्छ, तथापि देशमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहेकोले नीति निर्माताहरूलाई नेपालको बढ्दो जनसंख्याप्रति चिन्ता लाग्नु स्वाभाविकै हो । विश्वमा देखा परेका प्रमुख समस्याहरूमा जनसंख्या वृद्धि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिको कारणले जनसंख्याको चाप हरेक क्षेत्रमा परिरहेको छ । जनसंख्या समस्याबाट कुनै पनि मुलुक अछुतो छैन । प्राकृतिक स्वरूपलाई नष्ट गर्ने प्रमुख कारक तत्व जनसंख्याको अत्याधिक चाप हो ।
सबैलाई प्रत्येक वर्ष पिरोल्ने समस्याको रूपमा जनसंख्या वृद्धि नै हो । विश्वको जनसंख्या सात अर्ब ६२ करोडभन्दा बढी पुगिसकेको अनुमान छ । विश्वमा प्रत्येक दुई सेकेण्डमा नौ जना शिशुको जन्म र सोही समयमा तीन जना शिशुको मृत्यु हुने सम्बन्धित विशेषज्ञहरूको अनुमान छ । प्रतिदुई सेकेण्डमा छ जना नयाँ शिशुको अनुहार थपिनाले प्रत्येक वर्ष विश्वमा सात करोड ६० लाखभन्दा बढी मानिसहरू थपिन्छन् । जनसंख्याको प्रमुख बोझ विकासशील देशहरूमा परिरहेको छ । विकसित मुलुकहरूमा कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत र अविकसित मुलुकहरूमा ८० प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्दछन् । यसैगरी विश्वको कुल प्रजननदर २.३८ रहेको छ ।
विश्वको वार्षिक सरदर जनसंख्या वृद्धिदर १.५ प्रतिशत मात्र रहेको भएता पनि अविकसित देशहरूमा यसको वृद्धिदर दुई प्रतिशतभन्दा बढी भएको हुनाले सन २०२५ मा आठ अर्ब ३१ करोड र सन २०५० मा आठ अर्ब ९० करोड मानिसको जमघट हुनेछ । यसमा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या ४५ प्रतिशत रहेको छ । जनसंख्या वृद्धिको काहलीलाग्दो चापले अल्प विकसित देशहरूको समाजिक, आर्थिक तथा पर्यावरणीय क्षेत्रमा नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ । विकासशील देशहरूको पङ्क्तिमा पर्ने हाम्रो देश नेपालमा भने जनसंख्या वृद्धिको समस्या र यसबाट वातावरणमा परेको नकारात्मक असर अझै बढी देखिएको छ ।
हाम्रो देशको जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्ने हो भने वृद्धिदर अझै अतिउच्च नै छ । मुलुकको जनसंख्या वृद्धिदर तीव्र गतिमा वृद्धि हुँदै गएको विगतका जनगणनाबाट स्पष्ट हुन्छ । वि.सं. १९६८ सालदेखि नै नेपालमा जनगणना लिइएको भएता पनि वि.सं. २००९/११ देखि लिइएका जनगणनालाई मात्र वैज्ञानिक तरिकाबाट लिइएको मानिन्छ । यसरी वि.सं. २०५८ सालको जनगणनामा नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत रहेको देखिएको थियो । त्यसरी नै वि.सं. २०६८ सालमा लिइएको जनगणनाअनुसार नेपालको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.३५ प्रतिशत रहेको थियो । यसको साथसाथै औसत आयुमा वृद्धि, शिशु मृत्युदर घटाउने प्रयत्नहरूमा प्राप्त सफलताले मृत्युदरमा कमी आए पनि कुल प्रजननदर भने निकै लामो समयदेखि छ सन्तान प्रतिएक आमाको हाराहारीमा रहेकाले नै जनसंख्या वृद्धिदर नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन नसकेको हो । यही वृद्धिदर कायम रहेमा ३३ वर्षभित्र नेपालको जनसंख्या दोब्वर हुने अनुमान छ ।
वि.सं. २०५८ सालको जगगणनामा नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ३१ लाख ५१ हजार चार सय २३ रहेको अनुमान गरिएको थियो । नेपाल सरकारले वि.सं. २०६८ को जनगणना प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै दश वर्षको अवधिमा ३३ लाख ४३ हजार जनसंख्या वृद्धि भएको जनाएको थियो । यसमा नेपालको जनसङ्ख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार पुगेको थियो भने हालसम्मको अनुमान गर्ने हो भने दुई करोड ९६ लाखभन्दा बढी पुगेको अनुमान गरिएको छ । महिलाको जनसङ्ख्या एक करोड २८ लाख ४२ हजार ४१ अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ५१ दशमलव पाँच प्रतिशत पुगेको छ भने पुरुषको संख्या एक करोड २८ लाख ४२ हजार ४१ अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको ४८ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । यसलाई संख्यात्मक रूपमा हिसाब गर्ने हो भने पुरुषको दाँजोमा महिलाको झण्डै आठ लाख जनसङ्ख्या बढी देखिन्छ । पछिल्लो जनगणनाले देशको जनसङ्ख्या वृद्धिदर एक दशमलव ३५ प्रतिशत रहेको देखिएको छ, जसलाई प्रतिशतको आधार भन्ने हो भने शून्य दशमलव नौ प्रतिशत विन्दु घटेको हो ।
नेपालमा प्रतिघण्टा ६१ जना, प्रतिदिन एक हजार चार सय ६४ जना र प्रतिवर्ष झण्डै पाँच लाख ३२ हजार तीन ३६ मानिस थपिन्छन् । त्यस्तैगरी यस धर्तीबाट विदा लिनेकोे संख्या प्रतिघण्टा २६ जना, प्रतिदिन छ सय २४ जना, र प्रतिवर्ष दुई लाख ३० हजार तीन सय ८१ पुग्दछ र जन्मनेको संख्या प्रतिघण्टा सात जना, प्रतिदिन दुई हजार ८८ जना र प्रतिवर्ष सात लाख ६२ हजार सात सय १७ जना हुन्छन् । जनसंख्या वृद्धिदर नियन्त्रिण गर्ने आजसम्मका प्रयासहरू सफल नभएको यो एक उदाहरण हो । आजको विद्यमान जनसंख्यालाई त भरणपोषण गर्न हामी असमर्थ छौँ भने अब आउँदा वर्षमा वृद्धि हुने जनसंख्यालाई भरणपोषण गर्ने साधन र क्षमता हामीसित के रहने छ ? जनसंख्या नियन्त्रणतर्फ प्रभावकारी नीति निर्देशनको आवश्यकतालाई उपेक्षा गर्नु भयावह समस्यालाई निम्त्याउनु होइन र ? मुलुकको जनसंख्या झण्डै तीन दशकदेखि उच्च गतिमा वृद्धि हुँदै छ । यसको मुख्य कारण हो एकातिर मृत्युदरमा कमी आउनु र अर्कोतिर उच्च प्रजनन दर कायमै रहनु हो ।
विश्वका विभिन्न देशको तुलनामा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर निकै उच्च भएको तथ्य भटिन्छ । २०४८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या एक करोड ८४ लाख ९१ हजार ९७ पुगको थियो । कुल जनसंख्यामध्ये ४९.८७ प्रतिशत पुरुष ५०.१३ प्रतिशत स्त्री रहेका थिए । यही गतिमा जनसंख्या वृद्धि हुँदै गएमा आगामी ३१ वर्ष अर्थात् २०८२ सालभित्रै जनसंख्याको दृष्टिकाणले अर्को सिङ्गै नेपाल थपिने अनुमान गरिएको छ ।
अन्त्यमा भन्नुपर्दा विश्वमा विगत वर्षहरूमा भएको जनसंख्या वृद्धिलाई मनन गर्दा सुरुसुरुका वर्षहरूमा मृत्युदर तथा जन्मदर दुवै उच्च भएकोले विश्व जनसंख्या वृद्धिदर साह्रै नै कम रहेको पाइन्छ । पछाडिको समयमा प्रजननदर उच्च नै रहेता पनि मृत्युदरमा विस्तारै ह्रास आउन थालेपछि विश्व जनसंख्या वृद्धिदर विस्तारै बढ्न थाल्यो । यस्तैगरी हाम्रो देशको कुरा गर्दा आगामी २० वर्षको अवधिमा नेपालको प्रजननदर २.१ मा ल्याउने दीर्घकालीन लक्ष्यअनुसार प्रजननदर एक दशकमा एक बच्चाभन्दा बढीको दरमा घट्नुपर्ने देखिन्छ ।
तसर्थ नवौँ योजनामा जनसंख्या क्षेत्रले विगतका वर्षहरूमा भन्दा पनि बढी प्रभावकारी र द्रुत गतिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । नवौँ योजनाको अवधिमा जनसंख्याको वृद्धिदर प्रतिवर्ष २.२७ प्रतिशतले हुने अनुमान गरिएको थियो भने दशौं योजना अवधिमा उक्त वृद्धिदर अझ घटाउम्दै लैजाने नीतिहरू तय भएको अनुमान थियो । यसरी आजको विश्वका विकराल समस्याको रूपमा रहेको अत्याधिक जनसंख्यालाई समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता रहेको छ । जनसंख्या वृद्धि आज नेपालको मात्र नभएर विश्वको लागि ठूलो चिन्ताको विषयवस्तु भएको छ ।
हाम्रो देशमा जनसंख्या वृद्धिदर उच्च रहेकोले यसको व्यवस्थापन एउटा गम्भीर चुनौती समान छ । यसबाट एकातिर गरिबी, बेरोजगारी, अशिक्षाजस्ता समस्या थपिँदै गएका छन्, जसबाट प्रकृति प्रदत्त वातावरणीय स्रोेतमाथि चाप पर्न गएको छ भने अर्कोतिर बढ्दो जनसंख्याको आवश्यकता पूर्ति गर्न सामाजिक र भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने, शिक्षा र औद्योगिक तथा सहरी विकास गर्नुपर्ने अधिक खाद्यान्न आपूर्ति गर्नुपर्ने र अन्य थुप्रै विकासका कार्यहरूमा अतिरिक्त लगानी गर्नुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने अर्कोतिर भोक, रोग, गरिबी र अशिक्षाका विरुद्धमा जीवनस्तर सुधार गर्ने हाम्रा परिकल्पनाहरू साकार हुन नसक्नुमा जनसंख्या वृद्धिले प्रत्यक्ष असर परेको कुरालाई कसैले पनि नकार्न सक्दैन ।